Uhlu lwe-imeyili lwase-Antigua neBarbuda | Ikheli le-B2C | Idathabhegi Yokuposa Yamuva
Uhlu lwe-imeyili lwe-B2B
Uhlu lwe-imeyili yase-Antigua naseBarbuda
I-Latest Mailing Database ine-imeyili engaphezu kwe-300 yezigidi (b2b) yama-imeyili no-400 million abathengi (b2c) i-imeyili evela ezweni lomhlaba jikelele. Idathabheyisi Yokuposa Yakamuva ihlala ikunikeza ngalo lonke uhlu oluhlanzekile nolusha lwama-imeyili lokukhangisa ngemikhankaso yenkampani yakho yokuthumela ama-imeyili. Uzothola imininingwane engaphezu kwedatha enhle kusuka kunoma iyiphi enye inkampani enikezela ngohlu lwemeyili. Sizokunikeza ngemininingwane eyi-90% efanelekile. Yonke idatha yethu ukungena kabili nemvume eyisisekelo ngakho-ke ayikho inkinga nge-GDPR ekhonondayo. Sithengisa ikhophi elehlukile kunoma iyiphi i-database yethu. Ikhophi eyodwa yeklayenti elilodwa.
Idathabheyisi Yokuposa Yakamuva nayo izokusiza ukwakha uhlu lwakho lokuxhumana oluqondisiwe kusuka kunoma yiliphi izwe elihlosiwe, umuntu, imboni, idolobha. Thenga idatha kithi iphephile futhi iqinisekisiwe idatha yekhwalithi. Futhi, yiba nedatha ekulungele ongayithenga futhi ungayisebenzisela imikhankaso yakho. Futhi, uzothola usizo kithi uma udinga noma yikuphi ukubonisana ngemikhankaso yokuthengisa nge-imeyili.
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwe-imeyili yase-Antigua naseBarbuda
Uhlu lwe-imeyili lwase-Antigua neBarbuda
Ukumaketha nge-imeyili kuyindlela enhle yokwenza amakhasimende avakashele iwebhusayithi yakho, kuzolandela kahle umgomo olandelayo ngokusebenzisa isenzo abacele ukuba basithathe. Kodwa-ke, i-Latest Mailing Database ikunikeze uhlu lwe-imeyili lwase-Antigua neBarbuda ukudala imikhankaso yakho yokuthengisa nge-imeyili yenkampani. Intambo yengxoxo ezobanaka ku-imeyili yakho ukubaluleka kanye nezinzuzo zemikhiqizo nezinsizakalo obanikeze zona. Uma uthanda ukuthenga ikheli le-imeyili lase-Antigua neBarbuda bese ubona amaphakheji ethu.
Uhlu lwe-imeyili lwase-Antigua neBarbuda luzokuyisa kuleso simo esithile, ukuthenga lolu hlu lwe-imeyili kuzokunikeza iqiniso lokuthi amathemba akho angahle anamathele ezwini lakho ekukhangiseni imikhiqizo yakho. Ngenxa yokuthi lolu hlu lwe-imeyili lukunikeza imininingwane eqondile nenembile kakhulu evela kumikhombandlela ethembekile ezokusiza ukumaketha iklayenti elifanele ukubhalisela izinsizakalo zakho ngaphandle kokuchitha isikhathi.
Ikheli le-imeyili lase-Antigua neBaruda
Thenga i-Antigua neBarbuda Ikheli Le-imeyili
Uhlu lwe-imeyili lwase-Antigua neBarbuda luyisizwe esineziqhingi esiphakathi koLwandle lweCaribbean nolwandle i-Atlantic. Iqukethe iziqhingi ezimbili ezinkulu ezakhiwe, i-Antigua neBarbuda, nezinye iziqhingi ezincane. Ungakha uhlu lwakho lokukhangisa lwe-imeyili oluhlosiwe I-Antigua neBarbuda Uhlu lwe-imeyili. Uma ufuna imininingwane yolwazi yebhizinisi enhle kakhulu noma imininingwane yolwazi yokuthengisa, ngakho-ke kubalulekile ukuthi uthinte izinkampani ezidumile zemininingwane ezibe sebhizinisi iminyaka eminingi.
Uhlu lwe-imeyili lwase-Antigua neBarbuda luhlanganisa wonke amarekhodi afaka phakathi igama lokuqala, isibongo, igama lokuxhumana, igama lebhizinisi, ikheli, idolobha, i-Zip code, isifundazwe, ikheli le-imeyili, inombolo yocingo, inombolo yefeksi nekheli lewebhusayithi Uhlu lwe-imeyili lwe-Antigua neBarbuda kusuka ku-Latest Mailing Database noma i- latestdatabase.com inamarekhodi angu-1,200 avuselelwe aphelele ohlu lwama-imeyili afinyelela ku- $ 15 kuphela, okwesikhathi esisodwa nokulungisa inkokhelo kanye nesoftware elandekayo esheshayo engaba yifomethi yefayela le-Excel CSV. Izindlela zokukhokha zingenza okuyikhadi le-visa, i-master card, i-PayPal, i-Skrill, inyunyana yase-Western kanye namakhadi amaningi noma amadivayisi ongakhetha kuwo ekukhokheni izinsizakalo zethu ezinikezwa kusayithi lethu.
Ingqikithi yamarekhodi: 1200
I-Antigua neBarbuda Uhlu Lwama-imeyili Umbuzo nempendulo
Okubaluleke kakhulu, Inyanga ngayinye sibuyekeza ikheli lethu lokuxhumana. Sakha idatha yethu kusuka emithonjeni eminingi. Ngakho-ke ngemuva kokuthola idatha inyanga ngayinye, siyabuyekeza.
Ngemuva kwalokho, ukwenza ukuhleleka kungakapheli amahora ama-4 idatha yakho izolethwa futhi ngemininingwane yokuxhumana yangokwezifiso sithatha amahora angama-72 aphezulu ukuthola idatha yokwakha.
Ekuphetheni, Sikunikeza ngemininingwane eyi-95%. Ikheli lethu lonke lokuxhumana liqinisekisiwe ngeso lomuntu nekhompyutha.
Kodwa-ke, Sihlinzeka ngemininingwane yekheli lokuxhumana lebhizinisi futhi nedatha yekheli lokuxhumana lomthengi & nomuntu oxhumana naye wenkampani ngesihloko somsebenzi wenkampani nedatha yokusebenza komsebenzi. Futhi ungakha uhlu lwama-imeyili ngolwazi lokuxhumana lomuntu okubhekiswe kuye ngemboni noma izwe futhi usho nedolobha.
Lolu hlu lwe-imeyili lusha?
Noma kunjalo, lonke Uhlu lwe-imeyili lusha futhi luhlanzwa yithimba lethu.
Ngingayisebenzisa ku-CRM yami?
Ngamanye amagama, Ilungele ukusebenzisa noma iyiphi ipulatifomu ye-crm.
Ngingakwazi ukwakha imikhondo eqondisiwe?
Ngaphezu kwalokho, Uma uthanda ukwakha umkhondo oqondisiwe sizokwakhela wona.
Ngaphezu kwalokho, Senza ibhizinisi ngonyaka we-2012. Yithi kuphela inkampani enkulu kunazo zonke yomhlinzeki wedatha. Yonke ikheli lokuxhumana linembile ngama-95%. Uma uthola ngaphezu kwe-5% bounce data sizobe sesifaka imininingwane yethu. Yisiqinisekiso sethu leso.
Ngamanye amagama, Sizokunikeza ifomethi ehamba phambili noma ye-CSV yekheli lakho lokuxhumana eli-odiwe.
Ngaphezu kwalokho, lonke ikheli lethu lokuxhumana liyisisekelo semvume futhi i-GDRP isilungile.
Ekuphetheni, Umthombo wethu wedatha uyipulatifomu ehlukahlukene. Sithathe yonke idatha kumasayithi athembekile futhi sangena kumthombo wedatha kuphela. Sakha uhlu lwe-imeyili kusuka kumthombo webhizinisi nomthombo wabathengi.
Ikheli le-imeyili liyasebenza noma livumelekile?
Ngaphezu kwalokho, lonke ikheli le-imeyili liyasebenza futhi liyaphuma uma ngabe ikheli le-imeyili lingavumelekile ngakho sizobuyisa imali yakho.
Uhlu lokumaketha i-imeyili lusesikhathini?
Okubaluleke kakhulu, lonke uhlu lwethu lokumaketha lwe-imeyili lusesikhathini futhi lubuyekezwe muva nje.
Lolu hlu lokumaketha lwe-imeyili liletha ukuhola kokuthengisa?
Ngamanye amagama, Yebo uhlu lwethu lokuthengisa ngocingo luletha ukuhola okuvaliwe kokuthengisa kwenkampani yakho
buy database we-imeyili uae
uhlu lekheli le-imeyili
thenga uhlu lwe-imeyili
Ekhiqiza uhlu lwe-imeyili
uhlu lwabathengisi bezindawo zokuhlala
Inombolo yocingo yaseNew Zealand
ikheli le-imeyili ngesiFulentshi
Izinombolo zocingo zaseCosta Rica
Uhlu lwe-imeyili lwaseChina
Uhlu lwezinombolo zocingo lwase-USA
ikheli le-imeyili Kuwait
Izinombolo zocingo zase-Dominican republic
Ikheli le-imeyili laseJordani
Inombolo yocingo yaseTaiwan
thenga uhlu lwama-imeyili eNdiya